konfoshiyoos.luqada shiinaha(孔夫子)waxa uu ahaa faylasuuf shiine ah, waxaanu Ka mid ahaa faylasufyadii ugu waaweynaa ee adduunka soomara, waxa kaloo u ahaa faylasuufkii ugu horeeyay ee sameeya mad-hab faylasuufnimo oo ka kooban dhaqanka shiinaha dhamaan. Falsafadiisu waxa ay ku saleysantahay qiimaha iyo akhlaaqda qofku u hayo marka hore waalidkii, marka xiga shacabka, marka xiga la xukumuhu in uu dulqaato, xukumuhuna in uu cadaalad sameeyo. Waxay aad falsafadiisu ugu fiday wadama shiinaha.jaban.kuuriya.iyo fiyatnam.waxa lagu naanaysaa nabigii beriga Aasiya.
faylasuufkani waxa uu dhashay 551.kahor dhalashaddii nabi ciise. waxa uu ku dhasahy gobolka law.oo xiligaas ahaa dawlad iminkana ah gobol katirsan dawlada shiinaha.waxa uu kadhasahy reer aad u faqiira oo laakiin soojireen ah.aabihii waxa uu dhintay isaga oo jiray sadex sano oo kaliya. ugamna uu tagin wax ay masaariifsadaan taas oo hooyadii ku qasabtay in ay ushaqayso si ay masaariif ugu hesho.waxa uu guursaday marii ay dadiisu ahyd 19jir.lakiin waxa laysku khilaafsanyahay dadiisu intii ay ahayd markii uu bilaabay in uu haajiro oo uu shiinaha oo dhan kusoo wareego.
Machadka Confucius (Shiinaha: 孔子 学院; Pinyin: Kǒngzǐ Xuéyuàn) waa hay'ad waxbarasho oo dadwaynaha ah oo ku xiran Wasaaradda Waxbarashada ee Shiinaha,  Ujeedadeedu waa in lagu hormariyo luuqada Shiinaha iyo dhaqanka, barashada caalamka, iyo fududeynta is-weydaarsiga dhaqameed  
Barnaamijka Confucius Institute wuxuu bilaabmay 2004 waxaana kormeera Hanann (si rasmi ah Xafiiska Golaha Shuurada Shiinaha). Machadyadu waxay wadashaqeyn la yeeshaan kulliyadaha iyo jaamacadaha caalamiga ah ee ku yaal adduunka oo dhan, maalgelinta waxaa lagu wadaagaa Hanaan iyo hay'adaha martida loo yahay. Barnaamijka "Confucius Classroom Class" ee barnaamijka la wadaago dugsiyada sare ee degmada ama dugsiyada degmada si ay u siiyaan macalimiinta iyo agabka wax lagu dhigo.  
Shiinaha ayaa la barbar dhigtay Machadka Confucius ee Ururada Luuqadaha iyo dhaqanka sida Portugal ee Instituto Camões, Brazil's Centro Cultural Brasileiro, Golaha Britain ee Britain, Faransiiska Isbaheysiga Faransiiska, Talyaaniga Società Dante Alighieri, Spain Instituto Cervantes iyo Goethe-Institut ee Spain. Si kastaba ha ahaatee, sida ka duwan ururadan, Machadyo badan oo Confucius ah ayaa si toos ah uga shaqeeya xarumaha jaamacadaha, taas oo keeneysa in ay keenaan walaac gaar ah oo la xiriira xoriyadda tacliinta iyo saameynta siyaasadeed. 